Igbo Mass Readings for Thursday 6th Week of Easter - ASCENSION | Catholic Lectionary
THURSDAY: IZU UKA NKE ISII N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI. ASCENSION
Ihe Ogugu nke mbu – 1:1-11
Ezigbo Tiofilus, N’akwukwo nke mbu edere m ihe banyere ihe niile Jesu mere na nke o kuziri n’oge Q malitere oru Ya, ruo ubochi o rigooro n’eluigwe mgbe O nyechara umuazu ya iwu site n’ike nke Mmuo nso. Mgbe o tachara ahuhu nke onwu o gosiri ha onwe ya na ya di ndu n’uzo di iche-iche n’ime iri ubochi ano, na-akuziri ha banyere ala eze Chineke. Mgbe ha na ya no, o nyere ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem puo kama ka ha chere nkwa nke Nna kwere nke unu nuru n’onu m.
Ma Jon jiri mmiri mee ndi mmadu mmirichukwu ma n’oge na-adighi anya, a ga-eji mmuo nso eme unu mmirichukwu. Mgbe ha gbakoro ha juru Jesu si, “Onyenweanyi, O bu n’oge a ka i ga enyeghachi Izrel alaeze?” Jesu azaa ha si, “O bughi ihe diiri unu ima oge, ma o bu ubochi nke Nna m debere n’ike nke aka ya. Kama unu ga anata ike mgbe Mmuo Nso dakwasiri unu. Unu ga-abukwa ndi akaebe m, n’ime Jerusalem na n’ime Judia na Sameria niile, ruokwa ngwucha uwa niile. Mgbe Jesu kwuchara okwu ndi a ha no na-ele anya e welie Jesu elu, igwe oji wee kpuchie ya wepu ya n’anya ha. Ha legidere anya n’elu ka o na-aga, na mberede, umunwoke abuo yi uwe nruala ocha kwuuru ha nso, si ha, “Ndi Galili! Gini mere unu ji guzoro na-ele anya n’eluigwe? Jesu a onye nke si n’etiti unu rigoro n’eluigwe ga-abiaghachikwa ozo dika unu siri hu ya ka o na-ala n’eluigwe.
ABUOMA NA AZIZA: Ps: 47: 2-3, 6-7, 8-9.
Aziza: Chineke ji mkpu onu gbagoo, Onyenweanyi ji olu opiike arigo.
Ndi mmadu niile kuonu aka unu, were mkpu onu tikuo Chineke. N’ihi na Onyeneanyi onye kacha dj elu ka anyi ga-aturu egwu, o bu nnukwu eze nke na-achi uwa niile. Az./
Onyenweanyi ji olu opiike arigo. Chineke ji mkpu onu agbago, Kweerenu Chineke anyi ukwe otito, kweerenu ya ukwe, kweerenu eze anyi ukwe otito, kweerenų ya ukwe. Az./
Chineke bu eze nke uwa niile, werenu ukwe abuoma kweere ya ukwe otito, Chineke bu eze na-achi mba niile, O no n’oche eze ya di nso. Az./
IHE OGUGU NKE ABUO – 1:17-23
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi Pol Degaara ndi Efesus
Ka Chineke nke Dinwenu anyi Jesu Kristi, Nna nke otito, nye unu mmuo nke amamihe na nke mkpughe iji mata ya. Ana n arjokwa ka Chineke meghee anya nke obi unu, ka unu wee mata ihe bu nchekwube nke okpukpo o kporo unu, na ihe bu aku nke nketa ahu di ebube n’etiti ndi nso ya; na ihe bu idi ukwu na-enweghi atu nke ike ya n’ime anyi, bu ndi kwere ekwe, dika oru nke ike aka ya siri di. Nke a bu nke o mejuputara n’ime Kristi mgbe o siri n’onwu kulie ya, mekwaa ka o noro n’akanri ya n’alaeze eluigwe, ka o nodu n’ebe di elu karichaa ochichi niile na ike niile na i bu isi niile bia dikwa elu karja aha obula a marala, o bughi naani n’ogbo nke a, kama ma ogbo nke ga-abjanu. Chineke edobekwala ihe niile n’okpuru ukwu ya, mekwaa ya isi ihe niile maka nzuko ya, nke bu ahu, ya na uju nke onye ahu na-emezu ihe niile juputara ihe niile.
Gaanu mee ka mba niile buru ndi na-eso uzo m, anonyeere m unu oge niile ruo na njedebe nke oge.” ALLELUIA.
OZIOMA – 28: 16-20.
Mmadu iri na otu bu ndi na-eso uzo Jesu gara Galili n’ugwu ahu nke o gwara ha. Mgbe ha huru ya, ha kpooro ya isi ala. Ma ufodu nwere obi abuo. Jesu biakwutere ha, gwa ha si: “Enyela m ike niile di n’eluigwe na uwa. Ya bu, gaanu, meenu ka mba niile buru ndi na-eso uzo m, Na emenu ha mmirichukwu n’aha nna, na nwa na mmuo nso. Kuzierenu ha idobe ihe niile nke m nyere unu n’iwu. Lee, anonyeere m unu oge niile ruo na njedebe nke oge.’